ပိုလျှံအလေးချိန်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်သင့်အားကိုယ်အလေးချိန်နေရာဖြစ်သည်လေ့ကျင့်ခန်းမှာအလုပျနိုငျသောကွောငျ့, သေချာပေါက်အားကစားရုံသွားဖို့အချိန်ခွဲဝေချထားပေးရန်မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းစွာအ 15 မိနစ်ပေါ်မှာဖြုန်းနေကြတယ်။ နံနက်ယံ၌နှင့်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလပြီးနောက်ရလဒ်ကောင်းတွေနဲ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နံနက်ယံ၌လေ့ကျင့်ခန်းကိုတက်အားပေးစရာနှင့်ကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များတစ်တာဝန်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ နံနက်အားသွင်းစတင်သည် ဇီဝြဖစ် ခြင်းနှင့်ကြွက်သားအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါရှုပ်ထွေးတတ်နိုင်သမျှလက်ခံရရှိသလောက်ကြွက်သား load မှကွဲပြားခြားနားသောလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိရောက်သောအားသွင်းနိမ့်ဆုံးအရာကြွင်းသမျှလပ်ချိန်စေရန်ရှုပ်ထွေးဘို့ရွေးကောက်လေ့ကျင့်ခန်းအကြားလျှင်အမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့ကြလော့။ တိတ်ဆိတ်များအတွက်အများဆုံးအချိန် - တခဏ;
တစ်ခုချင်းစီကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း 10-15 အထပ်ထပ်လုပ်နေတာ, သုံးစုံအတွက်ဖျော်ဖြေရပါမည်။
။ 15 မိဖြုန်းဖို့လုံလောက်တဲ့လေ့ကျင့်မှုအတွက်အသွင်သဏ္ဌာန်ထား, သို့သော်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရချင်လျှင်, နာရီဝက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာရပါမည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုသာသင့်လျော်သောအစာအာဟာရလျှင်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ဆိုတာသတိရပါ။ dietetics ၏စည်းမျဉ်းများအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းတစ်ဦး menu ကိုဒီဇိုင်းအခါ။
နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးစတင်သင့် လေ့ကျင့်ခန်း ကြွက်သားများနှင့်အရိုးဆစ်အပူမှလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလည်ပတ်ဦးခေါင်း, လက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်, အဖြစ်တောင်စောင်း Follow နှင့်ခုန်။ သင့်အနေဖြင့်ပွဲချင်းပြီး run ဖို့ငါးမိနစ်အဘို့အနိုင်ပါတယ်။
ကီထိုင်။ ဒါဟာကီထိုင်ခြင်းထက်ခြေထောက်ချပေးဘို့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးထိရောက်တစ်ခုခုစိတ်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တင်ပါးအလျားလိုက်ရောက်ရှိဖို့မတိုင်မီပခုံးအဆင့်နှင့်အောက်မှာမှာသင်၏ခြေနှင့်အတူရပ်တယ်။ အဆိုပါထွင်ထားတဲခြေကျော်လွန်မသွားသင့်ရဲ့ဒူးကိုပြန်ပို့ရပါမည်။ လက်စွဲကိုယျ့ကိုယျကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်သူတို့ကို dumbbells ယူပါ။
ရှုပ်ထွေးသိုင်းကြိုး။ ဒါကြောင့်အများအပြားကြွက်သားအုပ်စုများကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ သေချာခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ဆက်ရပ်တည်ချက်နဲ့ခါးမှာအဘယ်သူမျှမ Bende အတွက်ကြောင်းအောင်, လဲလျောင်းရပ်တန့်ပေးပါ။ ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းဒူးကွေး, ပြီးတော့အခြားခြေထောက်နှင့်ရင်ဘတ်မှသူတို့ကိုတင်းကျပ်။
လိမ်။ သငျသညျဖြစ်လျှင်ဤစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကသူတို့ရဲ့နံနက်အစုံအတွက်ကိုဖွင့်, အဆင်းလှသောနှင့်ပြားချပ်ချပ်အစာအိမ်လိုပါသလား။ သင့်ရဲ့နောက်ကျောတွင်သင့်ဒူး ထောက်. တင်နိုင်နှင့်နားရွက်အနီးသင်၏လက်ကိုနေရာချ, တံတောင်ဆစ်ချိုးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်ထဲမှာညွှန်ပြ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထွင်ထားတဲရုတ်သိမ်းရေး, ဦးခေါင်းမှဒူးဆွဲထုတ်။ ထိုအခါပြန်စတင်အနေအထားကိုသွားပေမယ့်ကြမ်းပြင်တင်သောအပေါ်ခြေအကြံပြုသည်မဟုတ်။
အဆိုပါဆင်ခြေလျှော။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာလှပသွယ်လျခါးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘေးထွက်ကွေးထောင့်ဖြတ်လှည့်ကွက်အစားထိုးလိုက်ပါ။ လက်ခါးမှာကျင်းပနိုင်ပြီး, ကကျွမ်းဘားချောင်းကို ယူ. သူ၏ပခုံးပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တောင်စောင်းလက်ဝဲနှင့်လက်ျာဘက်လှည့်ကိုလိုက်နာပါ။
push-ups ။ အဲဒီမှာတွန်းအားပေး-ups အဘို့ options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကိုမိမိတို့အဘို့မဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ခုံတန်းလျားကနေတွန်းအားပေး-ups ကိုဆက်ကပ်။ ယင်းခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်လက်ဝါးထားပါနှင့်သင်တို့၏ခြေကိုကြမ်းပြင်ဆန့်ကျင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ဖြောင့်ခဲ့ကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။ ရင်ပတ်ကိုခုံတန်းရှည်မထိဖို့ကြိုးစားနေသည်တံတောင်ဆစ်ချိုးမှာလက်နက်ကွေးနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းလျှော့ချ။
လေ့ကျင့်ခန်း 2in1 ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာ, ဝန်စာနယ်ဇင်းနှင့်လက်တို့ကိုရရှိသွားတဲ့။ ဒူးထောကျ 90 ဒီဂရီတစ်ခုထောင့်မှငုံ့, သင့်ကိုပြန်အိပ်, သူတို့တင်ပြထားတယ်။ ရင်ပတ်ကိုအထက်ကသင်၏လက်၌ Dumbbells ။ နှစ်ဖက်စလုံးဖို့ dumbbells မှေးမှိန်, ဒါပေမယ့်ကြမ်းပြင်မထိကြဘူး။ လက်စွဲအနည်းငယ်တံတောင်ဆစ်ချိုးမှာတငျနိုငျသညျ။
အစားအသောက်ဆေးပြား - အထိရောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ
ဆူးပင်ကိုရေနံ - Slim ၏အသုံးပြုမှု
က Short-term memory ကိုအရှုံး
ဝမ်းနည်းလုပ်ထားတဲ့စက် - မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်တစ်ဦးကလေးတစ်ရုပ်
ဆိုဒါ whitening သွားများ
Atrovent သို့မဟုတ် Flomax - သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့?
Doy-Pack ကို packages များ
ပိန်စေဟင်းသီးဟင်းရွက် - တစ်လလျှင် 25 ကီလိုဂရမ်
အမျိုးသမီးတွေအတွက်သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေ 50 အပြီး